मेस्सी अझै एक महिना मैदानबाहिर रहने ! – Nepal Insider
आमाले जागिर लगाईदिन्छु भनेर लगेको भोलि पल्ट छोरी मकैबारीमा मृ त फेला, सम्झेर भक्कानो छोडेर रोइन दिदि (भिडियो सहित)
कर्मचारीलाई एक महिना बिदा दिने !
बिबाह गरी हाँसी खुशी जिन्दगि कटाउने सपना आधुरै रह्यो, विवाहको भोलिपल्टै दुलहीलाई को’रो’ना’ले गाँ’ज्यो,आठ दिनपछि अ’स्ता’इ’न् अस्पतालमा !
“श्रिमतिको पेटमा ‘क्यान्सर,श्रिमान यसरी श्रिमतिको गु’हार माग्दै धु’रु धु’रु रो’एको सायदै पहिलोपटक होला,कठै बि’चरा (हेर्नुस् भिडियो )
एउटा संगीतको बलियो खम्बा आज बाट ढल्यो, वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको पशुपति आर्यघाटमा यसरि भयो दाहसंस्कार (भिडियो सहित)
गज्जबको सरकारी निर्णय : कोरोना भाइरस संक्रमितलाई डेढ लाख भत्ता
प्रदेशकै ठूलो अस्पतालको मु’र्दाघरमा यौ’नध’न्दा
खुसीको खबर : आज एक हजार ७७५ सङ्क्रमितबाट कोरोनालाई जितेर निको भै घर फर्के
दुलाहाको घर भित्रिन नपाउँदै नुवाकोटकी बेहुलीको कोरोनाले लियो ज्यान
आज कोरोनाका कारण ११ पुरुष र ४ महिलाको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा २० देखि २७ बर्षका युवाहरु पनि
मुख्य पृष्ठ /खेलकुद/मेस्सी अझै एक महिना मैदानबाहिर रहने !
मेस्सी अझै एक महिना मैदानबाहिर रहने !
118 1 minute read
एजेन्सी, ११ भदौ । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी अझै एक महिना मैदानबाहिर रहने भएका छन् । केही समयअघि अभ्यासका क्रममा घाइते हुन पुगेका मेस्सी अब अझै १ महिना मैदानबाहिर रहने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले जनाएका छन् ।
स्पेनिस रेडियो स्टेशन ‘आरएसी वान’का अनुसार घाइते भएर ठीक हुन प्रयत्न गरिरहेका ३२ वर्षीय मेस्सी अझै एक महिना मैदानबाहिर रहनेछन् । मंगलबार उनी ठीक हुनका लागि अभ्यासमा जुटेका थिए, जसमा थप शारिरीक समस्या आइपरेको आरएसी वानले जनाएको छ ।
यसअघि मेस्सीले ला लिगाअन्तर्गतको रियल बेटिसविरुद्धको खेलबाट खेलमा फर्कँन सक्ने बताइएको थियो । तर, उनी पूर्ण रूपमा ठीक नभएपछि बार्सिलोनाले मेस्सीलाई बेन्चमै राखेको थियो । यस्तै बार्सिलोनाको तेस्रो खेलअन्तर्गत ओसासुनाविरुद्धको खेलबाट मेस्सी मैदान फर्किने सम्भावना रहेको जनाइएको थियो ।
तर, अब उनी एक महिनापछि मात्र बार्सिलोनाको खेलमा फर्किने आरएसी वानको दाबी छ । मेस्सीले रियल बेटिसविरुद्धको अभ्यास खेलमा पनि सहभागिता जनाएका थिएनन् । आफ्नै मैदानमा भएको बेटिससँगको सो खेल बार्सिलोनाले ५–२ गोलले जितेको थियो । मेस्सीले पिँडुलामा चोट बोकेका छन् ।
उनी घाइते भएपछि पनि लगातार अभ्यास गर्दै ठीक हुने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, एक महिना मैदानभन्दा बाहिर रहनुपर्ने भएपछि मेस्सीले ५ वटा ला लिगाका खेलहरू गुमाउनेछन् । उनले नवप्रवेशी क्लब ओसासुनाका साथै भ्यालेन्सिया, ग्रानडा, भिल्लारियल र गेटाफेविरुद्धको खेल गुमाउनेछन् । उनी ३ वटा अवे खेल र २ वटा घरेलु मैदानमा हुने खेल गुमाउँदा बार्सिलोनालाई थप सकस पर्ने देखिन्छ ।
यता, त्यो एक महिनाबीचमा २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूण खेल हुँदैछ । अर्जेन्टिनाले चिली र मेक्सिकोविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । यद्यपि, यस खेलका लागि भने मेस्सी टोलीमा परेका छैनन् । उनले कोपा अमेरिकाका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनलाई कोपाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उनी मैदानबाहिर रहने भएपछि बार्सिलोनालाई अझ सकस पर्ने देखिन्छ । मेस्सी मात्र नभएर बार्सिलोनामा स्टार खेलाडीद्वय लुइस स्वारेज र ओसमान डेम्बेले पनि घाइते अवस्थामा छन् । उनीहरूमध्ये स्वारेज केही चाँडो मैदान फर्किने भएपनि डेम्बेले भने मैदान फर्किन सक्ने अवस्था छैन । उनी पनि लामो समयका लागि मैदान बाहिर रहनु पर्ने अवस्था छ ।
मेस्सी र डेम्बेले टोलीमा नभएता पनि हालै एथ्लेटिको मड्रिडबाट क्याप नोउ आएका एन्टोइन ग्रिजम्यान, इभान राकिटिक, भिडाल, फ्रेन्क डी योङ, उम्टिटी, जोर्डी अल्बा, सर्जियो रोबर्टोले बार्सिलोनालाई अगाडि बढाउन सक्ने अपेक्षा लिएको छ ।
आज घट्यो सुनको मूल्य तोलाको कति ?
थपियो एक साता नि’षेधाज्ञा; बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म पसल खोल्न पाउने [ जानकारीको लागी एक शेयर गरौँ ]
भदौ १ देखि लामो दुरीका बस चलाउनेगरी गोंगबु बसपार्कमा तयारी..
प्रहरी मुख्यालयमा चार प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण, सवारी शाखा सि’लबन्दी
३ महिने शिशुसहित गण्डकी प्रदेशमा एकैदिन थपिए १०४ संक्रमित